Izindaba | Julayi 2021
Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izindaba, Wellness Umphakathi Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Cindezela Umphakathi, Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo, Izindaba Inkampani, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Izilwane Ezifuywayo
Kulinganiselwa ukuthi izingane eziyizigidi eziyi-6.1 zine-ADHD eU.S, zithinta abafana ngaphezu kwamantombazane, futhi izibalo zabantu abadala ze-ADHD ziyakhula. Thola amaqiniso amaningi we-ADHD lapha.
Siphilile kangakanani isimo sakho?
Yisiphi isimo esinempilo kunazo zonke e-U.S., Futhi yiziphi izifundazwe ezingenampilo? Thola ukuthi isimo sakho sinqwabelana kuphi ngokumelene nezimo ezinempilo kakhulu zango-2019.
U-62% uhlangabezana nokukhathazeka, ngokusho kocwaningo olusha lwe-SingleCare
Idatha yethu yocwaningo lokukhathazeka ikhombisa ukwanda kokukhathazeka uma kuqhathaniswa nezibalo zangaphambilini zokukhathazeka. Funda ukuthi ukukhathazeka kubathinta kanjani abaseMelika namuhla.
Cishe ama-31% abantu abadala bazobhekana nokukhathazeka ngesikhathi esithile empilweni yabo. Kuyisifo esivame kakhulu ukuphazamiseka kwengqondo e-U.S. Thola izibalo eziningi zokukhathazeka lapha.
Amakhithi wokuhlola asekhaya e-COVID-19: Esikwaziyo
I-FDA igunyaze cishe ama-200 kits okuhlola ama-coronavirus — amaningana angasetshenziswa ekhaya. Funda ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukuhlolwa kwe-coronavirus ekhaya bese uqhathanisa amakhithi wokuhlola lapha.
Ingane eyodwa kwezingu-54 ine-autism e-U.S., Iningi lazo elitholwa lineminyaka engu-4. Izibalo ze-Autism zikhuphukile, kepha ingabe i-autism ingubhubhane ngempela?
Izibalo ze-bipolar disorder 2021
Izibalo ze-bipolar disorder: 2.8% wabantu base-U.S. Bane-bipolar disorder. Izimpawu zivame ukukhombisa ngeminyaka engama-25. Ukuncishiswa kwesilinganiso sokuphila iminyaka eyisishiyagalolunye.
Ama-68% wabasebenzisi be-CBD bakuthola kusebenza, kepha ama-22% athi awakwethembi. Lungisa izibalo zakho ze-CBD ngaphambi kokuzama leli khambi lemvelo.
Izibalo zokucindezeleka 2021
Bangaphezu kuka-7% abantu abadala abanokudangala, kanti abantu abasha abaneminyaka engu-12-25 banamazinga aphezulu okucindezeleka. Bona izibalo zokudangala ngeminyaka nobangela.
Izibalo zesifo sikashukela 2021
U-11% wabantu base-U.S. Unesifo sikashukela — owaseMelika utholakala enesifo sikashukela njalo ngemizuzwana engu-17. Izibalo zesifo sikashukela ziyakhula. Nakhu ukuthi kungani.
Izimpawu zesifo sikashukela izinga eliphansi lempilo kwabangu-1 kwabangu-5 abaphendulile, kanti abangama-62% bakhathazekile ngokuthi basengozini ye-COVID-19. Bona eminye imiphumela yocwaningo nezibalo.
Izibalo zokuphazamiseka kwemikhuba yokudla emhlabeni jikelele zikhuphukile zisuka ku-3.4% zaya ku-7.8%. Cishe u-4% wabesifazane abasebasha banenkinga yokudla. Thola amaqiniso wokuphazamiseka kokudla lapha.
Izibalo zokungasebenzi kahle kwe-Erectile 2021
Izibalo zokungasebenzi kwe-Erectile ziveza ukuthi i-ED emadodeni amancane ayijwayelekile kepha iyanda. Funda ngokusabalala kwe-ED ngeminyaka, ubunzima, nembangela.
I-FDA igunyaza iBiktarvy ukuthi isetshenziswe kuma-regimens e-HIV
IBiktarvy uhlobo olusha, oluvunyiwe yi-FDA lwemithi ye-HIV. Izithako zalo (i-bictegravir, i-emtricitabine, i-tenofovir alafenamide) zivimba i-HIV ekuphindaphindeni. Funda kabanzi lapha.
I-FDA igunyaza enye indlela eshibhile ye-EpiPen
Ukwamukelwa kweSymjepi kuzokhulisa ukuncintisana kwezimakethe futhi kwehlise izindleko ze-EpiPen. Funda mayelana nenye indlela ye-EpiPen bese uthola isigqebhezana samahhala seSymjepi lapha.
IGlucagon generic iwina ukuvunywa kwe-FDA
Abantu abanesifo sikashukela bangaqala ukonga imali ngemijovo ye-glucagon. I-FDA ivume i-glucagon generic ngoDisemba 2020, ezotholakala ekuqaleni kuka-2021.
I-FDA igunyaza i-generic yokuqala yeProventil HFA
Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa e-U.S. I-FDA inikeze imvume iCipla Limited ukuthi yakhe i-Proventil HFA generic yokuqala (albuterol sulfate) yokuqala.
Ukuvunyelwa kwakamuva kwe-FDA kufaka phakathi izidakamizwa zokulutha i-opioid, migraines, MS
I-FDA igunyaza i-Lucemyra ekwelashweni ngemilutha ye-opioid, iGilenya njengomuthi we-multiple sclerosis, kanye ne-Aimovig njengomuthi we-migraine.
I-Tridjardy XR iyinhlanganisela yemithi emithathu yesifo sikashukela (metformin, linagliptin, empagliflozin). Funda ngalesi sidakamizwa esisha, esivela kanye ngosuku.
Indlela abantu abazizwa ngayo ngamagciwane — futhi uwagwema kanjani
Amagciwane akuyo yonke indawo, kepha ezinye izindawo zenza abantu baphume kakhulu kunezinye. Senze inhlolovo ukuze sifunde kabanzi ngokwesaba amagciwane nokuthi abantu benzani ukuwagwema.
uphuza muphi umuthi ukuze ube nesicanucanu
ungatshela kanjani uma ngabe une-lactose engabekezelelani
Ngingasusa kanjani ukhunta lwe-nail
sekwephuze kakhulu ukuthatha i-valtrex
ludinga ukuthathwa ngokushesha kangakanani uhlelo b